कारोबारको अन्त्यमा ०.६३ प्रतिशत बढ्यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर कारोबारको अन्त्यमा ०.६३ प्रतिशत बढ्यो नेप्से
मुख्य खबर, लगानी 63 views
कारोबारको अन्त्यमा ०.६३ प्रतिशत बढ्यो नेप्से
फागुन २, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत बढेको छ । नेप्से ८ दशमलव ६५ अङ्क बढेर १ हजार ३ सय ८८ दशमलव ९४ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार भएको पहिलो एक घण्टासम्म बढेको बजार त्यसपछि साढे २ बजेसम्म घटेको थियो । तर अन्तिम आधा घण्टामा नेप्से बढेर बन्द भएको छ ।
कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा बीमा कम्पनी, लघुवित्त र जलविद्युत कम्पनीको परिसूचक उच्चले बढेपछि नेप्से परिसूचक बढ्न पुगेको हो । बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ७५ प्रतिशत, लघु वित्तको १ दशमलव २५ र जलविद्युत कम्पनीको १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले परिसूचक बढेपछि नेप्से बढ्न मद्दत पुगेको हो । बाँकी चार समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कमले बढेको छ ।
परिसूचक घट्नेमा तीन समूह रहेका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ४ र ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव २ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक शेयरको प्रतिकित्ता रू. १ हजार १ सयमा रू. ५ करोड ५० लाख र प्रभु बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. २ सय २८ मा रू. ५ करोड ३१ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । यि कम्पनीको शेयर कारोबार बढ्नाले कारोबार रकम बढ्न पुगेको हो ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५५ कम्पनीको ३ हजार ४ सय २२ पटकको व्यापारमा ९ लाख ३१ हजार २ सय १६ कित्ता शेयरको रू. ३८ करोड ६४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमः सांसदले बोल्ने क्रम सकियो, प्रमको जवाफ आइतवार
सबै कामदार एक वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १८:४०
नीति तथा कार्यक्रमको अनुभूति कार्यान्वयनपछि मात्रैः राष्ट्रियसभा सदस्य
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १७:५२